Aayaha editorJanuary 2, 2019
Babaygu waxa uu dhiiri galiya qulqulka dhiiga caadada in uu si xiriir ah ay u hesho haweynaydu cabitaanka babayga oo si xiriir ah aad u wado dhowr bilood ayaa kaa caawinaysa in ay kuu saxanto caadadu xanuunka caadadana ay kaa yareyso, balse ma fiicna in la cabo babayga xiliga ay caadadu ay kuu joogto.
Kululeeyso galaas biyo ah oo sanjabiil ku dar sonkor yarna ku darso kadib isku qas sadexda waqti cuntada kadibna cab,
Tani ayaa kaa caawinaysa in aad si xiriir ah u hesho caadada waqtigeeda sidoo kale kaa caawanaysa in ay kaa yareyso xanuunka caadada.
kaliya in lagu carfiyo cuntooyinka looma isticmaalo balse waxa uu saxaa caadada sidoo kale waxa uu meesha ka saara xanuunka caadada,
Qaado galaas caano ah oo aan qaboobeyn ku darso qaado haafkeed oo qorfo tuman ah kadib cab.
ISKA YAREE WEL-WELKA AMA STRESSKA
Stress ku ama welbahaarku waa waxa ugu badan oo sababa in ay caadadu qaldanto fadlan isku dey in aad ka fogaato waxkasto oo welbahaar kuu keenaya hadii aad dumar tahay,
Sida welbahaarka la iskaga baabi’iyo waxaad ka heli kartaa iyadoo qormo ah page ka hoos u raac ama linkiga qaybta comments ka yaala ku dhufo.
MIISAANKAADO HADUU HOOSEEYO FADLAN CUNTO NAFAQO LEH CUN
Waxyaalaha keena in ay caadadu qaldanto waxaa kamid ah in uu miisaankaadu hooseeyo fadlan cuntadaada joogtee hadii aad heli karto,
Hana isku dayin in aad miisaankaada kor ugu soo qaado daawooyinka la isku cayiliyo ee Vitimiinaadka ah waayo iyagaa qatar kale oo weyn keena.
HADII MIISAANKAADU SARREEYO AMA AAD CAYILANTAHAY FADLAN HOOS U DHIG
Waxyaalaha keena caado wareerka ayaa kamid ahaa cayilitaanka saaidka ah fadlan iska dhim si ay caadadu kuugu saxanto baruurta adiga oo sameynaya jimicsi cuntada culus oo habeenkii ahna iska yareenaya.
SIYAABAHA KALE EE DHAKHTARKA
Hadii caado wareerku ay kuu keentay dheecanada taranka oo aan isku dheeli tirneen ama ay dhibaato ka jirto ka jirto qanjirka Thyroid waxaa qasab ah in aad booqato dhakhtarkaada si uu kuu baaro kadibna uu kuu siiyo daawooyin isku dheeli tira dheecaanada taranka.
Hadii aad leedahay sonkoroow waxa uu keenaa caado wareerka waa in aad la tashataa dhakhtarkaada si uu kuu xaliyo.
Fadlan hadii aad dhiikar ama Sonkoroow leedahay ha isku isticmaalin
Cunooyinkan waxaa macquul ah in ay kugu kiciyaan.
Caadada Caafimaadka xanuunka Caadada